Cali Gadh Dheer Wasiir Liita .! Cali gadh dheer waxaan leenahay kabo waaweyn tolataye , halkeed ku mari? |
Cali Gadh Dheer Wasiir Liita .! Cali gadh dheer waxaan leenahay kabo waaweyn tolataye , halkeed ku mari?
Cali Gadh dheer ayaa noqday mid si nacasnimo ah u xambaarsan fikradda boobka hantida ummadda ee Berbera ay ku hayso koox ganacsato xaaraan cun ah iyo xukuumadda xayraamiiinta ah ee Siilaanyo (Dircuno).
Cali Gadh dheer taariikh ahaan wuxu ahaa nin aan weligii shaqo dawladeed iyo mid u gaar ah weligii qaban isla markaana aan lahayn aqoon uu ku taxliiliyo hadba hawsha loo diro.
Wuxu caqliga kala mid yahay kuwii ay adeegsan jireen shuciyiintu markii ay gumaadi jireen dadka aqoon yahanka ah ee iyo kuwa diinta leh, wakhtigaasi oo la soo ururin jiray kuwo sida Cali aan aqoon lahayn laakiin baahi weyn u qaba in la siiyo shaqo uu ku noolaado ka dibna wixii la doono loo diro kuwaasi xataa waxay xasuuqi jireen saaxibadood iyo qoysaskooda.
Muxuu uga eegyahay Cali Gadh dheer kuwaasi ,maxaase xukuumaadda Siilaanyo ka shabahdaa shuuciyiintii boobayay hadba waxa ay shacbigu leeyiihiin?
Maalmahan waxa gobolka saaxil ka jira mushkuladda wareejinta haamaha kaydka shidaalka Berbera, arintaasi oo siyaasad ahaan khalkhal ku abuurtay dalka iyadoo xataa shir gudoonka Baarlamanku isku faro saaray. Iyadoo weliba lagu heshiiyay in qodobkaasi dagaalka keenay halkaasi lagu joojiyo madaama uu abuuri gaadhay khalkhal siyaasadeed.
Haddaba siilaanyo ayaa markii uu dalka ka dhoofayay todobaadkii hore Cali Gadh dheer u magacaabay wakiilka dawladda u fadhiya gobolka Saaxil! Yaab, waxaana jirta in gobolku leeyahay badhasaab Mr. Fahmi Bidaar. Derejada cusub ayaa Cali Gadh dheer .iyo badhasaabku isku fahmi waayeen, isagoo u arkay badhasaabku in shaqadiisii lagu soo duulay ka dib markii Cali Gadh dheer amar ku bixiyaya in la soo xidho odoayaal iyo cuqaal gobolka ah.
Cali Gadh dheer laftiisa ayaa derejadani wareerisay oo aan maanta ahayn qof caqligiisu shaqaynayo waayo waxa kala weyn xilka la saaray iyo miisaanka waayo araganimo iyo aqooneed ee maskaxdiisa. Cali Gadh Dheer kuma xidhna cuqaasha iyo aqoon yahanka gobolka saaxil, waxa keliya ee uu amarkooda qaadanaya sax iyo khalad kii ay doonto ha ahaatee waa xukuumadda mudadii sharciga ahayd ka dhamaatay ee u dhaqaaqday inay xaraashto hantida ummadda.
Xukuumadihii burburay ee shuuciyiinta ahaa ee la dhaqanka ahaa tan Siilaanyo waxa sabab u ahaa nooca dadka ay shaqada u direen jireen kuwaaasi oo iyagu uga jeedeen inuu amarakooda qaadanayo laakiin dhinaca kale aan maqli jirin, isagoo hadalkiisa iyo ficilkiisu noqon jiray ka xukuumadda ku abuura jabahadihii burburin jiray. Cali Gadh dheer ayaa isna manta saaxil ka abuuray jabhada la yidhaa Xoraynta saaxil taasi oo keentay in dadkii reer Saaxill ay hubkooda la soo baxaan taasi oo ku abuurtay dareen foojigan oo ku jiri tan iyo inta xukuumadani talada hayso, waayo xukuumadan waxay arkeen mid iskeed u shaqaysanysa oo aan tudhaale ka qabin dalka iyo dadka mida.
Cali Gadh dheer ama hanjabo ama xidho waxaanu leenahay xukuumadda iyo reer Berbera way is yaqaanaan, mana ah mid manta la is baranayo.
Cali Gadh dheer waxaan leenahay Kabo waaweyn tolataye ,halkaad ku mari doonto ayaa hadal ka taagan yahay !.
LAYLA AHMED <xafsa2007@yahoo.com
Gabileynew marnaba masuul kama aha Aragtida dadka kale. Qoraaga ayaa xumaanteeda, xushmadeeda iyo xilkeda sida.